देशभर र विदेशमा पनि पुग्ने भाटभटेनीको अभियान : सर्वाधिक कर तिर्ने करदाता बन्न अग्रसर | गृहपृष्ठ
Home कम्पनी प्रोफाइल देशभर र विदेशमा पनि पुग्ने भाटभटेनीको अभियान : सर्वाधिक कर तिर्ने करदाता बन्न अग्रसर
on: ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार ०९:३५ कम्पनी प्रोफाइल, बजार
देशभर र विदेशमा पनि पुग्ने भाटभटेनीको अभियान : सर्वाधिक कर तिर्ने करदाता बन्न अग्रसर
भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेण्ट स्टोरले आगामी १० वर्षभित्रमा मुलुकका सबै जिल्लामा भाटभटेनीको आउटलेट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअन्तर्गत कुल २ सय ४० ओटा स्टोरको योजना छ । यसका लागि भाटभटेनीले जग्गा किन्दै भवन बनाउन थालेको छ । यसैगरी सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको खण्डमा विदेशमा समेत भाटभटेनीको चेन विस्तार गर्ने योजना छ ।
यी २ सय ४० शाखामार्फत देशभरका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा सहज तथा अविच्छिन्न रूपले उपलब्ध गराउने योजना भाटभटेनीकोे छ । १० वर्षभित्र कम्तीमा यो स्टोरबाट ५० हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य लिँदै भाटभटेनी अगाडि बढेको छ । लगानी तथा रोजगारी विस्तारका साथै देशलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता बन्ने लक्ष्य पनि भाटभटेनीले लिएको छ ।
शपिङको अर्को नाम भाटभटेनी
भाटभटेनी सुपर मार्केटले सबै सामान एउटै छानामुनि ल्याउने उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिएकै कारण शपिङ गर्ने भन्नेबित्तिकै अधिकांशको मुखमा भाटभटेनी निस्किहाल्छ । अर्थात् आममानिसमा भाटभटेनी भनेकै सुपर मार्केट हो भन्ने भान पर्ने गरेको छ । यद्यपि, भाटभटेनी भनेको काठमाडौंमा अवस्थित एक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व को मन्दिर हो । भाटभटेनी मन्दिरछेउमा पहिलो स्टोर खोल्दा त्यसको नाम नै भाटभटेनी स्टोर राखिएको थियो ।
भाटभटेनीले मुख्यगरी ड्राई फ्रुट, मसला र दाल तथा गेडागुडीलाई आफ्नै ब्राण्डमा प्याकेजिङ गरी उत्पादनको रूपमा उपभोक्तामाझ ल्याइरहेको छ । यी सामानको कच्चा पदार्थ मुख्यतः नेपालभित्रैबाट र केही विदेशबाट सङ्कलन गरिन्छ र तिनलाई काठमाडौंको बौद्धमा प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गरिन्छ ।
नेपालभित्र छरिएर रहेका आफ्ना प्रतिनिधिले पहिले नै कृषकसँग उनीहरूको उपज खरीद गर्ने मूल्य र परिमाण तथा समय पक्कापक्की गर्छन् । त्यही कारण भाटभटेनीका ग्राहकले एउटै मूल्यमा सामान खरीद गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । देशभर नै भाटभटेनी सुपर मार्केट सञ्चालन गरी मुलुकभर एउटै मूल्यमा उपभोक्तालाई सहज तरिकाले सामान उपलब्ध गराउने योजना भाटभटेनीको रहेको छ ।
भाटभटेनीले मुख्य काजु, पिस्ता, नरिवल, छोकडा, बदाम (अलमोण्ड), किसमिसलगायत ड्राई फ्रुट आयात गरी आफैले प्याकेजिङ गरेर विक्री वितरण गर्छ । त्यसैगरी जिरा, धनिया, मेथी, आलस, सर्स्यूं, तोरी, सूर्यमुखीलगायत मसलाको पोषणतत्त्व नष्ट नहुने गरी प्याकेजिङ गरिँदै आएको भाटभटेनीको दावी छ ।
घरका लागि आवश्यक पर्ने होस् वा कार्यालयका लागि ती सबै सामान भाटभटेनीमा पाइन्छ भन्ने धारणा हरेक परिवारमा रहेको पाइन्छ । मोबाइल, टिभी, फर्निचर, खेलौना र घरायसी सामान पनि भाटभटेनीमा उपलब्ध छन् । राजादेखि रङ्कसम्म अर्थात् धनाढ्यदेखि गरिबसम्मले आ–आफ्नो गच्छेअनुरूपका सामान सहज र सुलभ रूपमा भाटभटेनीमा किन्न पाउँछन् ।
भाटभटेनी र मीनबहादुर
२०४१ सालमा नेपाल बैङ्कमा कार्यालय सहायक पदको जागीर खाँदै गरेका खोटाङका मीनबहादुर गुरुङलाई सटर भाडामा लिएर सानो कोल्डस्टोर खोल्दा उनलाई यत्तिको उचाइमा पुगिएला भन्ने लागेको थिएन । श्रीमतीको गहना बेचेर थालेको त्यो भाटभटेनी स्टोरले उन्नति गर्न थालेपछि उनले २०५१ सालमा नेपाल बैङ्कको अधिकृत तहमा पुगेको जागीर छाडे र रू. २५ लाखको लगानीमा दुईतले घर भाडामा लिएर ‘भाटभटेनी सुपर मार्केट’ शुरू गरे । सोही सुपर मार्केट अहिले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँ तथा काठमाडौंबाहिर पोखरा, बुटवल हुँदै विराटनगरसम्म पुगेको छ ।
५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको भाटभटेनी अहिले मुलुकको सबैभन्दा धेरै खुद्रा सामान व्यापार गर्ने केन्द्र बनेको छ ।
भाटभटेनी र भाटभटेनी मन्दिर
काठमाडौंका अधिकांशलाई शपिङ गर्नुपर्‍यो कि भाटभटेनी जाऊँ न भन्ने बानी परिसकेको छ । काठमाडौंको भाटभटेनीमा रहेको देवताको नामबाट शुरू गरिएको सुपर मार्केटले यति प्रभाव पारिसकेको छ कि भाटभटेनी भनेको देउता र टोलको नाम नभई सुपर मार्केटको नाम हो भने भ्रम परिसकेको छ ।
ललितपुर, लगनखेलका हरि महर्जनलाई पुतलीसडकका रिदेन श्रेष्ठले १ दिन भाटभटेनीमा भेटौं भनेर बोलाए ।
तर दुवैजना एकअर्कालाई कुर्दाकुर्दा हैरान भए । फोन गरेर कुरा गर्दा बल्ल थाहा भयो कि रिदेन भाटभटेनी मन्दिरमा कुरेर बसेका रहेछन्, जब कि हरि महर्जन पुल्चोकको भाटभटेनीबाहिर रिदेन आउने बाटो हेरेर बसे ।
‘सामाजिक उत्तरदायित्व’अन्तर्गत भाटभटेनीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानी उल्लेखनीय छ । भाटभटेनीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रू. १० करोडभन्दा बढीको लगानीमा आकस्मिक भवन बनाइदिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रका दुईजना विद्यार्थीलाई पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शास्त्र पढ्न छात्रवृत्ति दिइरहेको छ । पाँच वर्षे एमबीबीएस पूरा गर्न प्रतिष्ठानमा एकजना विद्यार्थीको २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गुरुङको व्यक्तिगत सहयोगमा १२ जना विद्यार्थीले विद्यालय तहको छात्रवृत्ति पाएका छन् । भाटभटेनी सुपर मार्केटको सहयोगमा त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न ७२ शøयाको अस्पताल बनेको छ ।
कोल्डस्टोरबाट सुपर मार्केट
२०४१ सालमा गुरुङले ३५ हजार रुपैयाँबराबरको लगानीमा महाराजगञ्जमा भाटभटेनी कोल्ड स्टोर स्थापना गरेका थिए । कडा मिहिनेत र अथक प्रयासबाट यसै पसललाई उनले देशकै लोकप्रिय प्रमुख सुपर मार्केट र डिपार्टमेण्टल स्टोरको चेनको रूपमा परिणत गरे । फलस्वरूप आज गुरुङ नेपालका सफल व्यवसायीमध्ये एक हुन् ।
विगतको दशकमा भाटभटेनी सुपरमार्केट अर्थात छोटकरीमा बीबीएसएमले आफ्नो चेनलाई तीव्र विस्तार गर्‍यो । सन् २००८ मा स्टोरलाई विस्तार गर्दै काठमाडौंको महाराजगञ्जमा दोस्रो स्टोर खोलियो । विस्तारको क्रम बढेसँगै विगत १ दशकमा स्टोर सङ्ख्या बढेर १४ पुगिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थलमा सीमित स्टोर अहिले चितवन, पोखरा, धरान र बुटवल र विराटनगरमा पनि विस्तार भइसकेको छ । आउँदा केही वर्षमा काठमाडौंसहित देशका अन्य स्थानमा समेत बीबीएसएम चेनलाई पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना भाटभटेनीले बनाएको छ ।
स्टोरहरूमा दैनिक ५० हजारभन्दा धेरै उपभोक्तासामान किन्न आउने र दैनिक ३ करोड ५० लाख रुपैया (औसत ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर)बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । बीबीएसएमले अहिले १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उत्पादन बेचिरहेको छ ।
जलविद्युत् र केबुलकारमा लगानी
भाटभटेनीका प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले व्यावसायिक रुचिलाई डिपार्टमेण्टल स्टोरमा मात्रै सीमित राखेका छैनन् । उनले रोबष्ट इनर्जीको ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् परियोजनामा पनि लगानी गरेका छन् । यसैगरी चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिमा समेत लगानी गरेका छन् । उनको कुमारी बैङ्कमा पनि लगानी रहेको छ ।
काठमाडौंको नक्सालस्थित भाटभटेनी मन्दिरको दक्षिणपूर्व आग्नेय दिशामा भाटभटेनी सुपर मार्केटको नाममा २५ वर्षअघि शुरू भएको डिपार्टमेण्ट स्टोर अहिले देशका प्रमुख शहरहरूमा विस्तार हुँदै आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा आइरहेको छ ।
काठमाडौं भाटभटेनीमा मात्र ११ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको डिपार्टमेण्ट स्टोरले अहिले देशका प्रमुख शहरमा एकपछि अर्को शाखा विस्तार गरिरहेको छ । भाटभटेनी, महाराजगञ्ज, बालाजु, चुच्चेपाटी, कोटेश्वर, कृष्णगल्ली–पाटन, कलङ्की, भक्तपुर, पोखरा, बुटवल, चितवन र धरानमा आफ्नै जग्गामा बनेका भवनमा सञ्चालनमा रहेका छन् । काठमाडौंको वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर, त्रिपुरेश्वरस्थित स्टोर भने भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
जग्गा किन्दै भवन बनाउँदै
व्यवसाय विस्तारका र सपना पूरा गर्न भाटभटेनीले व्यावसायिक एवम् प्राविधिक समूह नै तयार गरिसकेको छ । आवश्यकताअनुसार वित्तीय सहयोग पनि प्राप्त गरिरहेको छ । यसैले भाटभटेनीले जग्गा किन्दै भवन बनाउँदै व्यापार विस्तार गर्न सकेको हो ।
भाटभटेनीमा तीन ‘स’
भाटभटेनीमा तीन ‘स’ अर्थात् सफा, सहज र सस्तोको नियम लागू गरिएको छ । सफा ठाउँ, गुणस्तरीय सामान र आमउपभोक्ताले सहजै र सस्तो मूल्यमा खरीद गर्न सकून् भन्ने मान्यता भाटभटेनीको रहेको छ ।
भाटभटेनीमा दैनिक ३.५० करोड रुपैयाँ (औसत ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) बराबरको कारोबार हुने अनुमान छ । १४ मध्ये १३ ओटा स्टोर भाटभटेनीका आफ्नै घरजग्गामा छन् ।
को हुन् त गुरुङ ?
भाटभटेनी सुपर मार्केटका शुरुवातकर्ता र सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ एक कुशल व्यापारीका अलावा व्यापार व्यवसायका लगनशील योद्धा हुन् ।
पहाडी जिल्ला खोटाङको एक विकट गाउँमा मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा २०१४ सालमा जन्मिएका गुरुङले विद्यालय स्तरको शिक्षा गाउँमै पाए । एसएलसीपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानबाट आईए पास गरी २०३१ सालमा उनी काठमाडौं प्रवेश गरे । उनले २०३२ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल बैङ्कमा कार्यालय सहायक पदमा जागरि शुरू गरे ।
बैङ्कको जागीरमा मात्र उनी भुलेनन् । २०३४ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको रात्रिकालीन कक्षामा भर्ना भई आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिई बीए पास गरे । नियमित बैङ्कको काम गर्दागर्दै केही समय बेतलवी बिदासमेत लिई उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरबाट २०३९ सालमा अर्थशास्त्रमा एमए पास गरे ।
उनले २०५१ सालमा नेपाल बैङ्कको अधिकृत पाँचौं तह (सहायक प्रबन्धक) पदबाट राजीनामा गरी जागीर छाडे । जागीरपछि भाटभटेनीमा सम्पूर्ण उपभोग्य सामानको खुद्रा विक्रीकक्षसहितको डिपार्टमेण्टल स्टोर खोले ।
विश्व प्रसिद्ध खुद्रा व्यापारिक संस्था डिपार्टमेण्ट स्टोर वालमार्ट, आहदा, सेभेन इलाभेन जस्तै सम्पूर्ण उपभोग्य सामग्री उपलब्ध हुने र ग्राहकले खुद्रा मूल्यमा आफ्नो आवश्यकता, चाहना र उपलब्धताको आधारमा उपभोग्य सामग्री एकै स्थान वा एउटै छानामुनिबाट किन्न सक्ने व्यवस्थासहितको डिपार्टमेण्ट स्टोर भाटभटेनी सुपर मार्केट २०५० साल भदौ १ गते विधिवत् उद्घाटन भयो ।
सुपर मार्केट शुरू गर्नुभन्दा ५ वर्ष पहिल्येदेखि गुरुङकी धर्मपत्नीले भाटभटेनीमै दुईओटा पसल (कवल) भाडामा लिई खुद्रा पसल कोल्डस्टोर सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । व्यापारको त्यही अनुभवले जागीर गरेर जीवन निर्वाह मात्र हुन्छ, केही गर्न सकिन्न भन्ने बुझेर उनी जागीर छाडी व्यापार व्यवसायमा लागेका हुन् । उसो त जागीर गर्दागर्दै पनि उनले पत्नीले शुरू गरेको पसलमा बिहान, बेलुकी र बिदाको समयमा पर्याप्त समय दिँदै आएका थिए । तर, जुन दिन उनले नेपाल बैङ्कको जागीर छाडे, त्यसै दिनदेखि उनी आफ्नो व्यापार व्यवसायमा पूर्णकालीन बनेर लागे ।